केशु बिरही, ()
अरविक माटोमा जन्मिएर उर्दु, हिन्दी भाषा हुदै भित्रिएको गजल विधाले नेपाली माटोमा आज एउटा लामो काल खण्ड विताइसकेको छ । दसौ शताव्दीमै इरानी अन्धा कवी रौदकीले जन्माएको विस्वास गरिएको यो विधालाई नेपाली माटोमा भित्रिएको पनि आज लामो समय भैसकेको छ । गजललाई नेपाली माटोमा भित्र्याउने श्रेय भने मोतीराम भट्ट (वि.स.१९२३ –१९५३)लाई जान्छ । मोतीरामले भारतबाट यो विधालाई भित्र्याएको मानिन्छ । यसरी नेपाली मोटोमा भित्रिएर सवा शयको भन्दा लामो काल खण्ड विताइसकेको छ । <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
स्थापानकाल देखि नै गजलले ठूला ठूला हाँक र चुनौतिका सामना गर्दै आएको छ । लामो समय सम्म सुसुप्त अवस्थामा वसेको यो विधाले तीसको दशक पछि मात्र मौलाउने अवसर पायो । झाँगिने अवसर पायो । वि. स. २०३६ (जसलाई गजलको आधुनिक काल मानिन्छ) साल पछि भने गजलले व्यापक रुप नै लिन पुग्यो । त्यसमा पनि वि. स.२०४६ साल पछि त झन गजल लेखनको एउटा लहर नै चलेको पाइन्छ । के बुढा के तन्नेरी आज सवै गजल लेख्नमा तम्सिएका पाइन्छन । आफ्नो पनि गजलमा छाप छोड्न वा आफ्नो प्रभावलाई कायमै राख्न सवै हत्तारिरहेका देखिन्छन । यति सम्म कि हिजो गजल केही होइन । यो कनिष्ट एवम् तुच्छ विधा हो भन्नेहरु पनि आज चोरी चोरीकन भए पनि गजल लेख्न थालेका छन । कतै यो विधामा आफ्नो नाम नआउने पो होकि । कतै आफू पछि परिने पो हो कि भन्ने डरले होला । त्यसैले हत्तारिएका हुनसक्छन । यो नेपाली गजलका लागि । हामी गजल प्रेमीहरुका लागि सफलताको कुरा पनि हो । यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा पनि हो । अझ भन्दा यसलाई गजल प्रेमीहरुले एउटा जीतको रुपमा पनि लिएका छन ।
हुन त यति भएर मात्र गजलको विकाश भएको मानिदैन । नेपाली गजलमा आज त्यस्ता थुप्रै समस्या छन । दुविधाहरु विध्यमान छन । ती समस्या तथा दुविधाको अन्त्य गरिनुको साटो यदि यतिलाई नै गजलको प्रगति भएकोे ठानियो भने त्यो किमार्थ सत्य हुदैन । त्यो हाम्रो भ्रम मात्र हुने छ । नेपाली गजललाई माथि उठाउन थुप्रै कामहरु वाकी छन । थुप्रै वाटो हिड्नु छ । थुप्रै चुनौतिहरुको सामना गर्नु छ । चुनौतिलाई चिर्नु छ । नेपाली गजलमा आज थुप्रै अवरोधहरु छन । थुप्रै चुनौतिहरु छन । तिनीहरुलाई पन्छाउदै जानु नै आजको आवश्यकता हो । गजलमा देखिएका वाधा अवरोधहरुको निराकरण गर्दै जानु हाम्रो कर्तव्य पनि हो ।
नेपाली गजलका केही समस्या तथा चुनौतिहरु
गजल नितान्त गेय विधा हो । यसलाई अलग्याईनु हुदैन । गजलललाई गेय विधाको रुपबाट अलग्याइदै मात्र पाठ्य विधाको रुपमा वदल्ने प्रयासहरु भैरहेको छ भन्ने आवाज पनि आइरहेका छन । गजललाई बहर वा लयबाट टाढा पारिदै छ । कतै यसले गजलको मुल्य मान्यतालाई त खतरामा पर्ने होईन भन्ने शंका उपशंकाहरु पनि उव्जीरहेका छन । यदि साच्चै यस्तै भयो भने यो राम्रो हुने छैन । यसको वारेमा सचेत हुनु पर्ने वेला आएको छ । यसका वारेमा गजल प्रेमीहरु एक जुट हुनु पर्ने वेला आएको छ ।
गजल नेपाली माटोमा भित्रिएको यतिका साल भै सक्दा पनि गजलमा देखिएका विवाद तथा दुविधाको अन्त्य गर्ने काम हुन सकेको छैन । विवादहरु ज्यूँका त्यूँ छन । अझै पनि हामी अन्योल मै छौ । ती अन्योलका अन्त्य गरिनु पर्छ । समाधान हुनु पर्छ भन्ने मान्यता हो ।
हुनत अपेक्षाकृत रुपमा नभए पनि गजलले धेरै ठूलो फड्को मारिसकेको भने पक्कै हो । गजल आज अन्य विधाको तुलनामा चर्चित तथा लोकप्रिय विधाको रुपमा स्थापित भैसकेको छ । आज के वुढा के तन्नेरी सवैले यो विधालाई मन पराएका छन । गजलमा आफ्ना मनका भावनाहरु पोख्न आतुर देखिदै आएका छन । हुनत गजलमा संख्यात्मक प्रगति मात्र भएको छ । यसमा आलाकाचाको मात्र सहभागिता वा वढी आकर्षण छ भन्ने गरिए पनि संख्यात्मक मात्र नभएर गुणात्मक प्रगति पनि प्रसस्त भएका छन । आलाकाचा मात्र नभएर हाल यस विधामा अन्य विधामा स्थापित श्रष्टाहरु पनि आकर्षित हुदै छन । यो विधा उनीहरुको आकर्षणको केन्द्र विन्दु वन्दै आएको छ । पछिल्ला समयमा सुन्दर भन्दा सुन्दर गजल कृतिहरु पनि आईरहेका छन र आउने क्रममा छन । यसरी हेर्दा यो विधाको भविष्य उज्जल देख्न सकिन्छ । तर दुःखको कुरो के छ भने गजलले यति धेरै प्रगति गरिसक्दा पनि आजसम्म गजललाई एउटा छुट्टै विधाको रुपमा स्वीकार्न कन्जुस्याई भैरहेको छ । आज पनि केही मानिसहरु गजललाई कविताको संज्ञा दिने र त्यही अनुसारको व्यबहार गर्न पनि पछि परिरहेका छैनन । उनीहरुमा पुरातन एवम् अग्रगमन विरोधी सोच हावी देखिदै आएको छ । उनीहरु आफ्नो सोचलाई परिवर्तन गर्न चाहिरहेका छैनन । त्यसैले कहि गजललाई कविता र कही गीतकै श्रेणीमा राखिरहेको पाईन्छ । त्यस्तै कतिले छोटो भएकोले मुक्तक वा गाउन सकिने भएकोले गीत भनेर पनि वुझ्ने वा त्यही मुताविक व्यवहार पनि गरिएको पाइन्छ । गाउँदैमा गीत र छोटो हुदैमा मुक्तक हुन्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । त्यो सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।
हुन त त्यसो हुनुमा हाम्रो पनि ठूलो कमजोरी रहेको छ । हामी हाम्रो रचना प्रकाशन मात्र भए होस भन्ठान्छौ । तर यसको अस्तित्व के छ । यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिदैनौ । अर्थात हामीलाई मात्र हाम्रो रचना छापिदिए पुग्छ । त्यो गीतको नाममा छापियोस या कविताको नाममा । अझ गीत नै भनेर छापिदिइयो भने पनि हामी मख्ख हुन्छौ । मुक्तक नै भनिदिए पनि केही छैन । मेरो रचना छापियो भनेर मख्ख पर्छौ । छाती फुलाऔछौ । तर यो गलत हो । रचना छापिनु नै सवै थोक होइन । एक पटक सोच्नु आवश्यक छ । यदि कसैले हामीलाई अरु नै कसैको नाम लिएर वोलायो भने वा त्यही अनुसार व्यवहार गर्र्न खोज्यो भने कस्तो होला । के त्यो हामीलाई पाच्य हुन्छ ? के हामी त्यसलाई सहज रुपमा लिन सक्छौ ? त्यस्तै गजललाई गजल नभनेर कविता वा गीत वा मुक्तक भन्दा कस्तो होला ? कस्तो लाग्ला ? के यो न्यायोचित व्यवहार हो त ? के तपाईलाई यो चित बुझ्छ त ? के यसले गजलको विकाशमा टेवा पुग्छ र ? यसले गजलको अपमान भएन र ? अनि गजलको अपमान भए पछि हामी गजलकार भनेर छाती फुलाउनेको चाही के मान भयो र ? आफ्नै अपमान भएको मन पराउने हामी कस्तो मानिस ?
हो, यसको लागि अव सोच्नु पर्ने वेला आएको छ । यसबाट वच्न के गर्नु पर्ला भन्ने जिज्ञासा आउनु स्वभाविक नै हो । र आउदै गरेका छन पनि । यसको एउटा मात्र उपाय हुन्छ त्यो हो संघर्ष वा तिरस्कार । हामीले त्यस्ता गजलको अस्तीत्व नस्वीकार्ने पत्र पत्रिकालाई वा संचार माध्यमलाई तिरस्कार गर्नु पर्छ । हामी हाम्रा रचनाहरु नदिन पनि सक्नु पर्छ । र नदिनु नै वेश हुन्छ । वा संघर्ष गर्न सक्नु पर्छ । वुझाउन सक्नु पर्छ । गजल गजल नै हो यो न गीत वन्न सक्छ न कविता वा मुक्तक नै । वुझाउन नसक्नु भनेको चाही हाम्रो कमजोरी हो ।
हामी कलम चलाउछौ र चलाउदै आएका छौ पनि । तर किन हाम्रो कलम त्यस वारेमा चल्दैन ? गलत कुराको विरोध गर्न किन डराउने ? त्यस्ता गल्ती जस्ले सुकै गरोस । ती मधुपर्क होस या गरिमा जुन सुकै हुन तिनीहरुको कमजोरीको वारेमा लेख्नु पर्यो नि । (यहा आएका मधुपर्क वा गरिमा एउटा दृष्टान्त मात्र हुन ।) आफ्ना रचनाहरु प्रकाशित नगरिदेलान कि भनेर हामी कमजोरीलाई पनि कमजोरी भनेर भन्न डराउ छौ । अर्थात हामी चाकरी चाप्लुसी तर्फ अभिप्रेरित देखिन्छौ ।
अर्को कुरा भनेको हामी हामी विचमा पनि एकता छैन । नेपाली राजनीतिको प्रभाव गजलमा पनि नराम्ररी छिरेको छ । हामी पूर्वमा वस्ने पूर्वेली पश्चिममा वस्ने पश्चिमेली । हामी झापाली झापाली एक हुनु पर्दछ । हामी काठमाण्डौ वस्ने एक हुनु पर्दछ । भनेर गुट उप गुटमा विभाजित छौ । अथवा झापा नै गजलको गढ हो । चितवन गजलको गढ हो । अथवा काठमाण्डौ काठमाण्डौ नै हो भन्ने सोच लिन्छौ । (यहा काठमाण्डौ, झापाली वा चितवन दृष्टान्तको रुपमा मात्र प्रयोग भएका छन) अनि यही अनुसार हामी व्यवहार गर्छौ पनि । नेपाली गजलका हामी पुजारी भएर पनि राजनीतिमा प्रभावित भएर व्यवहार गर्छौ । अनि यसतो कार्यले कहा गजलको विकाश हुन्छ त । यस्तो कार्यले त गजललाई झन कमजोर वनाउछ । एउटाले उठाएको सही कुरा नै भए पनि हामी विरोध जनाइहाल्छौ । त्यही क्षेत्रीयता र जातीयतामा अडिएर । त्यही अघिल्लो र पछिल्लो पुस्ताको संज्ञा दिएर । क्षेत्रीयता वा पुस्ताको धङ्गधङ्गी हामीबाट कहिलै पनि हराउन सकेको छैन । हामी स्थानलाई मात्र महत्व दिन्छौ । अर्थात केन्द्रमा वसेकोमा गर्व गर्छौ । त्यहा वसेर रचिएका रचनाहरु अत्कृष्ट हुने र मोफसलमा वसेर रचिएका रचनाहरु कमसल हुन्छन भन्ने हामीमा भ्रम छ । कतै हामी भिडलाई त विश्वास गरिरहेका छैनौ ? कतै हामी साहित्यलाई प्रदर्शनीमा राख्ने सामान त ठानिरहेका छैनौ ? अनि हामी (माथि) उचाईमा पुगे पछि उधो देख्दैनौ पनि । अर्थात देख्नै चाहादैनौ पनि ।
अनि अर्को कुरा हामी बिच श्रेय कस्ले लिने भन्ने वारेमा लडाइै नै हुन्छ । होड नै चल्छ । यदि मैले उस्को कुरामा सहमती जनाएँ भने त उसैले श्रेय लिईजान्छ नि । उस्लाई सवैले चिनिजान्छन नि । म त पछि परि जान्छु नि भन्ने सोचबाट ग्रशित छौ । यही सोचेर हामी असहयोगी वन्न पुग्छौ । असहमती जनाउन पुग्छौ । सवैलाई थाहा छ यो आवस्यक्ता हो । तर जुँगाको लडाईले गर्दा राम्रै कदमको पनि असहयोग हुन सक्छ । अनामण्डली एवम् पल्लव लगायतका समूह तथा केही व्यक्तीहरुले गजलमा बहर आन्दोलन नै छेडेका छन । कसैले बहरवादी आन्दोलनको नाम दिएका छन भने कसैले परिस्कारवादी आन्दोलन । गजलमा परिस्कार चाहनु भनेको राम्रो कुरा हो । यो आजको आवस्यक्ता पनि हो । नेपाली गजलको चिन्ता हुनु । गजललाई सही बाटोमा लैजान पाए हुन्थ्यो भन्नु । अर्थात गजललाई परिस्कार गरेर अझ सुन्दर पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच आफैमा स्वागत योग्य कुरा हुन । यो सवैमा हुनु पनि पर्छ । (यहा माथि उल्लेखित संघ संस्था वा व्यक्तीहरुले मात्र यो आन्दोलन चलाएका छन अरु सवै चुप छन भन्ने चाही होईन । त्यस्ता थुप्रै संघ संस्था तथा व्यक्तीहरुले पनि यस्ता खाले आन्दोलन चलाउदै आएका छन ।)
त्यस्तै बहरवादी र बहर विरोधी बिचको टकरवाव पनि देखिन थालेको छ । एउटाले अर्कोको अस्तीत्व माथि प्रश्न चिन्ह उठाईरहेको आभाष हुन थालेको छ । बहरको वारेमा चर्चा परिचर्चा हुनु त राम्रो कुरा हो तर यसरी एक आपसमा लड्नु चाँही गजलको लागि राम्रो संकेत मान्न सकिन्न ।
यहा अभियानकर्ता भने प्रष्ट छ । उसले कुनै पनि वादको प्रतिनिधित्व गरेको छैन र गर्दैन पनि । मात्र उसले त गजलमा बहरको आवश्यक्ता छ । बहरको प्रयोगले गजललाई विगार्ने होइन अझ सुन्दर वनाउछ । यस तर्फ सोच्नु पर्छ । बहरको वारेमा अध्ययन गर्नु पर्छ भन्ने आसय मात्र हो । यहा प्रष्ट हुनु जरुरी छ कि यो अवधारणा अर्थात यो अभियान कुनै वादको वकालत गर्न भने आएको होइन । कुनै एउटा कुरालाई मात्र प्रश्रय दिन चाहेको पनि होईन । अभियानले कुनै पनि अतिवादको वकालत पनि गर्दैन । बहसको क्रममा यी सारा कुराहरु त आउन सक्छन । चर्चा परिचर्चा हुन सक्छन नै । र हुनु पर्छ पनि । सवैलाई आ–आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ । आफूलाई मन परेको विचार राख्न पाउछन । र राख्दै आएका छन पनि । तर ती विचारले गजललाई नकारात्मक वाटो तर्फ लैजानु चाही हुन्न भन्ने आसय मात्र हो ।
नेपाली गजल आजको यो अवस्थामा आई पुग्नमा तपाईहरु जस्ता तमाम गजल प्रेमीहरुको ठूलो योगदान रहेको छ । हाम्रा अग्रजहरुको अथक प्रयासले नेपाली गजल आजको यो अवस्थामा आइपुगेको हो । यस क्रममा गजलले थुप्रै आरोह अवरोहहरु झेल्नु पर्यो । थुप्रै चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्यो । हाम्रा अग्रजहरुले ती चुनौतीहरुको डटेर सामना गरे र आजको यो अवस्था सम्म ल्याई दिएका छन । उनीहरुले वचाएको यो विधालाई हामीले पनि वचाउन सक्नु पर्छ । हामीले पनि होष्टेमा हँैसे लगाउनु पर्छ । र लगाइरहेका छौ पनि । त्यसैले त आज गजल गजल भनेर चिनिन सफल भएको छ । गजल गजलको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । यस्ले आज आफ्नो छुट्टै आकाशको निर्माण गरिसकेको छ । हुनत अझै पनि गजललाई देखिनसहने हरुले यसको विरोधमा आफ्ना अभिमतहरु निमार्ण गरिरहेका छन । यो भेल हो । किर्ने काँडा जस्तै हो भनिरहेका छन । तर हामीले वुझेका छौ गजल एउटा भेल मात्र होईन । यो कुनै कमजोर किर्ने झार जस्तै होइन र हुने वाला पनि छैन । गजल एक सशक्त विधा हो । गजल सफल एवम् वयस्क विधा हो । यसले अन्य विधाका हजारौ पानामा लेखिएको ग्रन्थ या महाग्रनथले पनि उठाउन नसकेका वा वर्णन गर्न नसकेका विषय वस्तुहरुलाई पनि सरल र सशक्त रुपमा उठाउदै आएको छ ।
यो विधा विचार र विषय वस्तुका दृष्टिले पनि उतिकै सशक्त छ । उतिकै सवल हुदै आएको कुराको प्रमाणित हुदै आएको छ । र भै रहेका छन पनि । त्यसैले पनि उनीहरुका ती गजल प्रतिका विचार वा धारणा गलत सावित भैसकेका छन ।
आज कहि अस्तित्वको लागि लड्नु पर्ने वेला आएको छ भने कहि सुद्धीकरणको लागि । त्यस्तै कही परिस्कारको लागि पनि । यो हाम्रो आन्दोलन प्रेमपूर्ण हुने छ । आफ्नो अस्तित्वको लागि अरुको अस्तित्वलाई संकट पार्नेखाले होईन । सह अस्तित्व र सहयोगको भावले अग्रसर हुनु पर्छ । त्यसको लागि हामीले वोलेर होइन सिर्जनामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । संख्यात्मकता भन्दा पनि गुणात्मकता तिर ध्यान दिन सकेमा नै गजलको अस्तित्व नस्विकार्नेहरु र गजललाई फाल्तु विधाको संज्ञा दिनेहरुका ती धारणाहरु आफ्से आफ हटेर जाने छन । गलत सावित भएर जाने छन । र उनीहरुले पनि यो विधाको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने छन ।
आज गजलमा त्यस्ता थुप्रै दुविधाहरु रहदै आएको कुरामा कुनै दुई मत छैन । प्रयोगका नाममा होस या अन्य नाममा होस गजललाई क्लिष्ट एवम जटिल वनाइने कार्यको अन्त्य हुनु पर्छ । गजलमा देखिएका विवाद वा दुविधालाई सर्वजना वसेर छलफल गर्नु पर्ने वेला आएको छ । सार्वजनिक बहस चलाउनु पर्ने वेला आएको छ । आज यिनै यावत कुरालाई ध्यामा राख्दै यो अभियानको संचालन गरिएको हो । यीनै माथिका उदेश्य पुर्तीका खातिर यो सार्वजनिक बहस आउनु परेको हो । त्यसैले आउनु होस हामी एक जुट भएर नेपाली गजल संवन्धी यो महान यात्रामा अघि वढौ । गजल संवन्धी अनलाइन अर्थात इन्टरनेट बहसमा सहभागी वनौ । बहसमा भाग लिऔ ।
बहसमा भाग लिन चाहने संपूर्ण गजल प्रेमीहरुले आफ्नो विचार सोझै लेखक वा अभियान कर्ताको इमेल ठेगाना keshubirahi2008@yahoo.com वा birahikeshu@gmail.com मा पठाउन सक्ने छन । तर इमेल गर्दा युनिकोर्डमा नलगी (प्रिति फन्टमा लेखेर) पठाउन अनुरोध गरिन्छ । साथै बहस संवन्धी जानकारी वा बहसका वुँदाहरु विभिन्न साहित्यिक अनलाईन पत्रिकामा राखिने छ । त्यस्तै फेसवुकमा रहनु हुने महानुभावले सवै जानकारी फेसवुक मार्फत पनि पाउनु हुने छ ।